'1984' Ho vanim-potoana fohy indrindra an'ny AHS - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly '1984' Ho fotoana fohy indrindra an'i AHS hatrizay
'1984' Ho fotoana fohy indrindra an'i AHS hatrizay
by Timothy Rawles Oktobra 31, 2019
by Timothy Rawles Oktobra 31, 2019 705 hevitra
Ny sasany mety tia azy, ny sasany mety tsy, fa AHS: 1984 hanana ny famaranana amin'ny 14 novambra ho avy izao, ka io no vanim-potoana fohy indrindra ho an'ny andiany hatreto.
1984 dia ny hevitra hafahafa satria Roanoke, ny sasany aza milaza fa ny fihodinana amin'ity taona ity dia ny filma VHS.
Amin'ny vanim-potoana fahasivy izao, 1984 dia manomboka amin'ny famerenanana an'ireo mpikomy tamin'ny folo taona neon, nefa tsy misy iray akory, fa roa mpamono olona manenjika mpanolotsaina any an-toby amin'ny ala efa nilaozana izay heverina hisokatra amin'ny ankizy ny ampitso.
Araka ny antenaina amin'ny boilerplates karazana, ny mpanolotsaina dia alaina tsirairay amin'ny fomba isan-karazany, samy manana ra betsaka araka izay azo atao.
Nizara roa ny mpankafy satria toy ny ankamaroan'ny famokarana Murphy, tsy dia misy toa azy ireo ny zava-drehetra ary manjary tsy fantatra mazava hoe iza no tena mpamono olona, ​​manodinkodina ny andian-dahatsoratra amin'ny lalana rehetra.
Miaraka amin'ny hafohiny, ny mpijery mitady valiny dia tsy hiandry herinandro vitsivitsy fotsiny.
Raha ampitahaina, Trano famonoana olona nanana fizarana 12, fialokalofana nanana fizarana 13, Coven nanana fizarana 13, Freakshow nanana fizarana 13, Hotel nanana fizarana 12, Roanoke nanana fizarana 10, sekta nanana fizarana 11, ary Apokalypsy nanana fizarana 10.
Na dia tsy eo aza ireo mpilalao lehibe sasany amin'ity vanim-potoana ity: Kathy Bates, Sarah Paulson, Lady Gaga, manome fotoana hafa hamirapiratra amin'ny toerany ny hafa. Ny fanamarihana manokana dia tokony ho any amin'i Gus Kenworthy sy Pose's Angelica Ross.
American Horror Story dia miparitaka amin'ny Alakamisy amin'ny 10 alina ao amin'ny FOX. Kitiho eto ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.